5 siyaabo inay sawiro ka Mac / pc wareejiyo iphone
Photos Dhoofinta ka Mac / PC in iphone
In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waxa aad u adag tahay in la sii xaddi badan oo xogta ah ee qalabka Xararad sida dushooda oo timir ah. Waa muhiim u weyn inuu u dhaqaaqo xogta storage devices dibadda si ay halkaas ku sii jiraa weligiis iyo weligiis ma libidha. Sida marka la barbar dhigo qalabka Xararad waa in la ogaadaa in storage devices dibada ka yimaada sida Mac buugaagta iyo daaqadaha laptop ka badan la isku halayn karo waa iyo in la hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa dhammaan wakhtiyada. Ilaalinta xogta ayaa faaidooyin in loo arki doonaa marka ay timaado tutorial this:
Part1: Isticmaalka Wondershare TunesGo Retro xogta kala iibsiga ka PC / Mac si iPhone
Part2: Isticmaal Lugood in ay sawiro ka Mac / pc wareejiyo iPhone
Part3: Isticmaalka Email inay sawiro ka Mac / pc wareejiyo iPhone
Part4: Isticmaal iCloud Drive in ay sawiro ka wareejiyo Mac / pc in iphone
Part5: Isticmaal Online Cloud Storage sida WordPress in ay sawiro ka Mac / pc wareejiyo iphone
Qeybta 1: Isticmaalka Wondershare TunesGo Retro xogta kala iibsiga ka PC / Mac si iPhone
Waxaa ilaa hadda mid ka mid ah barnaamijyada software ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo si loo hubiyo in sawiro laga soo Mac ama PC wareejiyo iPhone la effortlessness by. Si aad u sawiri on barnaamijka macmiisha ee uma baahna in la bixio casriga ah sida ay u ogolaan doonto in user si ay u gudbiyaan files ka computer si PC kaliya hal talaabo. Baaritaanku wuxuu software in la soo bandhigay by users ayaa sidoo kale la hubiyo in codsiga ah oo qiimihiisu yahay isticmaalaya. Iyada oo aan wax lug ah technology daruur waxa aad u muhiim ah in la ogaado in suuqa kala iibsiga uu yahay 100% oo nabad iyo xasilooni sida offline deegaanka ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa. Accomplishment sidoo kale waxaa la samayn karaa iyadoo:
Copy music, playlists, videos ka iPod, iPhone & iPad in Lugood Library, iyo in aad PC u gurmad. Maamul & Bedelka Photos, Messages, Xiriirada & Files dhexeeya iPhone, iPad & PC.
i. User wuxuu u baahan yahay in ay ka soo dejisan iyo gashato dhex URL http://www.wondershare.com/mac-ios-manager http://www.wondershare.com/mac-ios-manager oo la furo si ay u hubiyaan in interface soo socda ayaa la heli:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in taleefanku xiran yahay in kombiyuutarka sida kaaga muuqata sawirka hoose:
iii. Software ayaa si toos ah lagu ogaan doonaa sawirada iyo sidoo kale macluumaadka la xiriira on Mac sida lagu muujiyay shaxanka hoose:
iv. User ayaa markaas u baahan yahay in guji dari on sare ee suuqa kala software sida loo arki karaa in Muuqal dhejiyo ee hoosyimaada halkan. Tani waxay u baahan tahay in la sameeyo si loo hubiyo in files ka Mac ama PC waxaa loo doortay in ay tahay in lagu wareejiyo iPhone.
v. Marka faylasha lagu soo xulay interface ka user markaas u baahan yahay in guji furan loo wareejiyo iPhone si loo hubiyo in nidaamka la soo gabagabeeyey.
Part2: Isticmaal Lugood
Si aad u soo ku saabsan natiijada unsurpassed baahan yahay waa in la sameeyo:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in iPhone waa xiran PC sida lagu muujiyay shaxanka hoose:
ii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in aan bilowno Lugood iyo dooro content in ay tahay in lagu daro qalabka sida ka muuqata shaxanka hoose:
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in qalabka uu ku yaal adiga oo riixaya icon telefoonka oo uu soo iftiimiyay:
iv. On menu soo socda user ay u baahan tahay si aad u hubiso "Gacanta maamuli music iyo videos" sida ka muuqata shaxanka hoose:
v. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in shaashadda soo socda ka codsan button dhufto si uu u dhameystiro nidaamka.
Part3: Isticmaal email
Waxaa by fog habka ugu fudud oo loo isticmaali karo in ay xogta ka mid meel wareejiyo kale sida iPhone. Si aad baa loogu fudud samaysay geeddi-socodka waa:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in mail ka laxamiistaha cusub la furay oo waxaa la samayn karaa adiga oo riixaya Command - N on Mac sida kaaga muuqata sawirka hoose:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay inuu ku qor cinwaanka email weyddiisteen oo riix icon pin si loo helo sawir ah in uu yahay in lagu lifaaqo sida hoos ku qoran:
iii. Marka email ayaa ka kooban iyo sawirka ayaa ku lifaaqan user ku riixi kartaa batoonka la diro si ay u dhammaystiraan geedi socodka sida hoose lagu arki karaa:
iv. User ayaa ka heli kartaa cinwaanka email isla telefoonka bartilmaameedka si loo hubiyo in email waxaa kaliya ma arki laakiin ku lifaaqan ayaa waxaa sidoo kale soo bixi.
Part4: Isticmaal iCloud Drive
Ka hor intaadan dalban habka user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in drive iCloud waxaa firfircoonaan ku iPhone iyo sidoo kale Mac falanqeeyo siman shaqada la qabtay. Si aad u heshid natiijada loo baahan yahay si fudud waxaa lagula talinayaa in ay helaan wax ay xaq u leeyihiin in arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in iPhone uu xiriir la Mac iyo doorbidida waxaa lagu heli sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in guji iCloud sida waxa loo arki karaa in si dhekhso hoos ku qoran:
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in drive iCloud la hubiyaa sida hoose lagu arki karaa:
iv. Marka la sameeyo user ay u baahan tahay in la hubiyo in qalabka cusub ku xiran Mac iyo nidaamka dib ayaa loo bilaabayaa si hagaagsan files la phone caga si loo dhamaystiro hawsha.
Part5: Isticmaal Online Cloud Storage sida WordPress
Si aad u hesho guul hab wanaagsan ee suurtogalka ah ka dib waa in la sameeyo arrintan la xiriira si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa gudahood markii ay suurto gal ugu yaraan iyo sida ay tahay doonista iyo rabitaanka isticmaalaha:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in codsiga DropBox waxaa taabtay gal screen guriga ee telefoonka ah sida ka muuqata shaxanka hoose:
ii. On shaashadda soo socda user awood u yeelan doonaan in ay arkaan oo dhan files iyo sawiro iyo walax kale oo uu soo badbaadiyey in WordPress sida muujinayaa shaashadda hoose;
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylka la doonayo waxaa la furay waxaa gujinaya si interface soo socda u muuqataa. Interface ayaa ku kala duwan yihiin sida ay nooca file ah in la soo heli:
iv. User ayaa markaas u baahan yahay in guji fallaadhii ku koonaha midig ee faylka sida oo hoos ku qoran ayaa loo arki karaa:
. v user waxay badbaadin kartaa sawir sida menu soo socda u muuqataa sida ku cad shaxanka hoose si aad u dhameysan habraaca fudayd iyo qanacsanaanta,
Sida loo Undelete Faylal ay ku iPhone
Sida loo dhaqaaq iPhone Photos in an External Hard Drive
An Easy Jidka si dhaqaaq Photo Album inay ku iPhone
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay iPhone